महिला सौन्दर्य प्रतियोगितामा बिजेता बनेका एक पुरुष « Janata Samachar
महिला सौन्दर्य प्रतियोगितामा बिजेता बनेका एक पुरुष
प्रकाशित मिति : 10 February, 2018 8:08 am
काजखस्तान । २२ वर्षका एक फेसन मोडल ‘मिस भर्चुअल काजखस्तान’ को फाइनल राउण्डमा पुगिन्, तर उनी एक महिला नभएर पुरुष हुन् । अरिना अलियेवा (वास्तविक नाम, ईले डियागिलेव) ‘मिस भर्चुअल काजखस्तान’ का लागि भइरहेको अनलाइन प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगे । उनको तस्बिरलाई दुई हजार भन्दा धेरै भोट मिल्यो ।
यसरी फाइनल राउण्डमा पुगेपछि अलियेवालाई ‘मिस भर्चुअल शमकन्द’ घोषणा गरियो । शमकन्द काजखस्तानको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको प्रान्तको राजधानी हो ।
तर अलियेवाको खुशी केही समयका लागि मात्रै रह्यो । आयोजकले गलत जानकारी दिएको भन्दै उनलाई अयोग्य घोषित गरे । क्षेत्रीय उपाधि तथा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि अब आयोजकले ईकेरिम तमिरखानोवालाई चयन गरेका छन् । उनलाई १९ सय ७५ भोट मिलेको थियो ।
फाइनलमा पुगेको दुई दिनपछि ईले डियागिलेवले स्वीकार गरेका थिए कि उनी महिला नभएर पुरुष हुन् । अरिना अलियेवा आफ्नो टिम प्रोजेक्ट रहेको उनले बताएका छन् । उनले भने ‘धेरै महिलाले सोच्छन् कि राम्रो देखिनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो र राम्रो देखिन मुश्किल पनि छ । तर मैले साथीहरुसँग पुरुष पनि महिला भन्दा राम्रो देखिन सक्छन् भनेको थिएँ ।’
उनले भने ‘म १७ वर्षको हुँदादेखि फेसन जगतमा छ । मोडलको रुपमा काम गर्छु । मेकअपको माध्यमले आफूलाई सजिलै बदल्न सक्छु । मैले एक फोटोग्राफर, हेयरस्टाइलिस्छ र मेकअप आर्टिस्टलाई बोलाएँ अनि आफूलाई अरिनाको रुपमा तयार गरेँ ।’
आफू फाइनलमा पुग्दा अचम्मित भएको उनको भनाई छ । इन्स्टाग्राममा आयोजना गरिएको यो प्रतियोगितालाई धेरैले रुचाएका छन् । धेरैले डियागिलेवलाई अपवादको रुपमा चित्रित गरेको छन् र उनी धेरै महिला भन्दा सुन्दर रहेको बताएका छन् । तर केहीले भने उनको आलोचना पनि गरेका छन् ।
‘आँखा भरी’ लिएर आईन मेलिना राई (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चर्चित गायिका मेलिना राईको आवाजमा ‘आँखा भरी’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ
क्षितिज गिरीको ‘मायालु’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गायक एवं कुशल गितार वादक क्षितिज गिरीको ‘मायालु’ बोलको रोमान्टिक गीतको म्यूजीक भिडियो
स्वस्तिमा अभिनित ‘बुलबुल’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौ । पछिल्लो समय फरक प्रचार शैलीको कारण चर्चामा रहेको चलचित्र ‘बुलबुल’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको
अप्रेशन कक्षमा डाक्टर र नर्सः अवस्था यस्तो छ ! भिडियो भाइरल
काठमाडौं । भारतमा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । एक अस्पतालको अप्रेसन थिएटरमा डाक्टर र
२०७५ माघ ४ गतेको राशिफल
मेषः धन सम्पत्ति बढ्नेछ, इष्टमित्रको सहयोग पाइनेछ । वृषः काम छिटो बन्नेछ, आत्मसम्मान मिल्नेछ । मिथुनः यात्रामा समस्या एवम् पैसाको…
सामुहिक बलात्कार आरोपमा चार जना पक्राउ
हिमलाल पराजुली स्याङ्जा । १६ वर्षीया किशोरीलाई सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले चार युवालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा…
UPDATE: केसीलाई इलामबाट झापा पठाइयो
इलाम । २५ पुसदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन एम्बुलेन्समा राखेर झापा पठाइएको छ । झापाको भद्रपुरबाट हेलिकोप्टरमा काठमाडौं…
इँटा भट्टाको वाल भत्किँदा २ बालबालिकाको…
रोजन तामाङ काभ्रे । पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित वीर हनुमान इँटा उद्योगको वाल भत्किँदा २ बालबालिकाको मृत्यु भएको…
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भोलिदेखि संयोजक भर्ना
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संञ्चालनका लागि शुक्रबारदेखि रोजगार संयोजक भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । ७ सय…
‘गुरुले परीक्षा लिए शरीर दिनसक्छौ ?’ (बमजनको नालीबेली)
त्रिपालमा सुत्छन् कैदीबन्दी, क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी !
नेपाल–जापान बैठक, श्रमिक भर्ना अप्रिलदेखि
मुख्यमन्त्रीको आक्रोशः ‘सीडीओ किन यति शक्तिशाली ?’
सीजीलाई झड्का : सर्वोच्चले गर्यो अनुमति खारेज
काजकिरियाको ६ महिनापछि ‘मृतक’ फर्केपछि…
आजदेखि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार खुल्दै
डा. केसीलाई राति नै काठमाडौं ल्याइयो, आईसीयूमा भर्ना